Home - Word of Truth, Nepal
के ख्रीष्टले अधोलोकमा जानुभई सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो?
ख्रीष्टको दोस्रो आगमन सम्बन्धी गलत धारणाहरू
पवित्र आत्माद्वाराको बप्तिस्मा र पवित्र आत्माको भरपूरी
पेन्टेकोस्टल पथको संक्षिप्‍त इतिहास
पेन्टेकोस्टलवादका ३५ ओटा सैद्धान्तिक सवालहरू
पवित्र आत्मा पाउनुभयो?
अन्यभाषा – १
अन्यभाषा – २
हल्लाउन नसकिने विश्वास
प्रेरित यूहन्नाको पहिलो पत्र
पहिलो शमूएलको पुस्तक
सङ्गीत विवेचना – १
सङ्गीत विवेचना – २
श्रावाण २०७५ बाइबल कन्फरेन्स
बाइबल कसरी अध्ययन गर्ने
तपाईंको पहिलो खाँचो →
उच्चकोटी चिकित्सकहरूले कोभीड-१९ को चमत्कारपूर्ण औषधीको रूपमा आइभरमेक्टिनको सिफारिश गर्दछन्
हामी हरेक किसिमको ठगी धन्दादेखि टाढा बस्न उत्सुक छौं चाहे त्यो धर्म सम्बन्धी, राजनीति सम्बन्धी वा औषधी विज्ञान सम्बन्धी ठगी धन्दा होस्।
मैले मुक्ति पाएको दिनदेखि म के कस्ता कुराको भागीदार बनेको छु?
हरेक साँचो ख्रीष्टियन एउटा आत्मिक खरबपति हो। बाइबलले यो बताउँछ कि ख्रीष्ट गरिब बन्नुभयो (अनि हाम्रो लागि मर्नुभयो) यस उद्देश्यले कि उहाँको गरिबीद्वारा हामी धनवान् बन्न पाऔं।
के सङ्गीत तटस्थ हुन्छ?
आधुनिक ख्रीष्टिय सङ्गीत (Contemporary Christian Music, छोटकरीमा CCM, सीसीएम) लाई अँगाल्नेहरूको एउटा प्रमुख विश्वास यो छ कि सङ्गीत एक तटस्थ अथवा निष्पक्ष कुरा हो। यो न ता असल हुन्छ न ता खराब, न ठीक न बेठीक…
नयाँ रिपोर्ट: उत्तर कोरियामा भयावह सतावट
मानव अधिकार सम्बन्धी निगरानी राख्ने एउटा संस्थाले तयार गरेको नयाँ रिपोर्टले उत्तर कोरियाभित्र भयावह रूपमा धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लङ्घन भइरहेको कुरालाई प्रकाशमा ल्याएको छ।रिपोर्टमा इसाईमत अँगालेका नागरिकहरूलाई क्रूरतापूर्वक यातना दिइएको कुरा छ। बाइबल साथमा पाइएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिइएको छ।
एकजना ८ वर्षकी सानी नानी थिई जसको नाम बिनु थियो। ऊ आफ्नी आमालाई घरको काममा सघाउन मन पराउँथी। तर जहिले पनि, उसकी आमाले उसलाई अह्राउनुभएको कामगर्नुभन्दा ऊ आफैलाई मन परेको काम गर्न खोज्थी।
एक बिहानको कुरा हो, बिनुले आफ्नी आमालाई भनी, “ममी, म तपाईंलाई आज मदत गर्न चाहन्छु। म तपाईंको नोकर बनेर खेल्छु र सबै कामहरू गर्छु नि — रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ।”
कप्तान आलेन गार्डनर
संसारको नक्सामा दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा दक्षिणी टुप्पामा पाटागोनिया (Patagonia) र टेरा देल फुएगो (Terra del Fuego) भेट्टाउन खोज्नुहोस्। त्यहाँका मानिसहरू अरू कुनै ठाउँका मानिसहरूभन्दा खराब थिए। तिनीहरू मान्छेको मासु खाने नरभक्षी थिए र प्राणीहरूमा सबैभन्दा घिनलाग्दा थिए। त्यसबाहेक तिनीहरू सबभन्दा निर्दयी पनि थिए। बोल्दाखेरि उनीहरूको आवाज घाँटीभित्रको खकार निकाल्न खोजेको जस्तो सुनिन्थ्यो अनि उनीहरूको कुरा बुझ्न त असम्भवै थियो।
« Previous Page Page1 Page2 Page3 … Page5 Next Page »
नयाँ लेख, भिडियो अडियो लगायत नयाँ सामग्रीका बारेमा जानकारी पाउनलाई आफ्नो इमेल पठाउनुहोला।
दैनिक बाइबल पठन तालिका​
एक वर्षमा पूरै बाइबल पढ्नुहोस्
बाइबल पढ्न चुनौति
पेन्टिकोस्टलवादका ३५ ओटा सैद्धान्तिक सवालहरू
बाइबलीय पहिरन – एक चुनौती!
© 2020 Word of Truth